पहिलो पटक सेक्स गर्दै हुनुहुन्छ? यी सात कुरामा ध्यान दिनुहाेस् – Health Post Nepal
पहिलो पटक सेक्स गर्दै हुनुहुन्छ? यी सात कुरामा ध्यान दिनुहाेस्
२०७८ भदौ ५ गते १९:४५
अचेलका युवा पुस्ता सेक्सलाई लिएर उदार छन्। केही त ‘लिभ इन’ सम्बन्धमा समेत बसेका हुन्छन्। प्रेमी–प्रेमिकाबीच पनि यौन सम्बन्ध अचेल सामान्य नै मानिन थालिएको छ। यदी तपाई पनि यस्तो सम्बन्धमा हुनुहुन्छ र पहिलो सेक्सको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ दिइएका केही टिप्स अपनाउनुस् जसले त्यो पललाई जिन्दगीभरको यादगार पल बनाउनुका साथै आनन्दमय पनि बनाउने छ।
पहिलो पटक सेक्स गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने आफूलाई सेक्सी भएको मशसुस गर्नुस्। दुवैजनाले सेक्सअघि सरसफाइमा ध्यान दिनुस्। सेक्सअघि नुहाउनुस्, पुरुषले सेभिङ गर्नुस्, दुवैजनाले दाँत माझ्नुस्, राम्रो खालको सेन्ट प्रयोग गर्नुस्। महिलाले ट्रान्सपेरेन्ट भित्रि वस्त्र लगाउन सक्नुहुन्छ। यसले दुवैलाई सेक्सका लागि अझ आकर्षित गर्छ।
लुब्रिकेन्ट्स साथमा राख्नुस्
आज पनि धेरै मानिसको धारणा यही छ कि पहिलो सेक्समा महिलामा ब्लिडिङ हुन्छ भन्ने। यसलाई धेरैले भर्जिनिटीसँग दाँज्छन्। तर, यो गलत हो। ब्लिडिङ हुने वा नहुने ुहाइमनु मा निर्भर हुन्छ। आजकाल महिलाहरु थुप्रै शारीरिक अभ्यासमा सहभागी हुन्छन्। जस्तो साइक्लिङ, डान्सिङ, स्विमिङ या अरु नै स्पोर्टस्। यस दौरान उनीहरुको ुहाइमनु च्यातिन सक्छ। त्यसैले पहिलो सेक्समा ब्लिडिङ भएन भने महिलाको क्यारेक्टरमाथि प्रश्न नउठाउनुस्। यो सोच मनबाटै निकालिदिनुस्।